FISOKAFAN’NY HABAKABAK’I NOSY BE : Nilamina ny fandraisana ireo mpizaha tany andiany voalohany
Tonga ilay nandrasana. Nigadona tao amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Fascène ao Nosy Be, omaly, ny fiaramanidina nitondra ireo mpizaha tany miisa 114 avy any ivelany, raha nikatso izany nandritra ny enim-bolana. 2 octobre 2020
Voahaja ny fepetra ara-pahasalamana ary naneho ny hafaliany ireto mpizaha tany tamin’ny fahatongavany.
Nizotra ara-dalàna ny fahatongavan’ny fiaramanidina voalohany ity. Tsy kisendrasendra izany fa samy nandray ny andraikitra tandrify azy avy ny tompon’andraikitra rehetra tao an-toerana. Nisaotra azy ireo ny Minisitry ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro Randriamandranto Joel. Nambarany fa tombony ho an’ny ezaka manaraka ny dingana vita. “Na izany na tsy izany, ekena hoy izy raha nanontanian’ny mpanao gazety, fa tsy maintsy misy ny pitsopitsony nojerena ihany ho fanatsarana hatrany ny dingana manaraka sy hampiroboroboana ny fizahantany eto amitsika”. Nomarihiny fa efa misy amin’ireo Kaompaniam-pitaterana an’habakabaka no naneho sahady ny fahavononany hitatitra mpizaha tany aty amitsika, amin’ny volana desambra. Anaovana ezaka ihany koa, hoy ny minisitra, ny fampiroboroboana ny fizahantany ato anatiny ary efa misy tetikady mazava tsara hirosoana amin’izany. Fantatra fa hisy sidina manokana (charter) mankany amin’ireny toerana fizahantany maromaro eto amitsika. Amin’ity volana ity ohatra, hoy hatrany ny minisitra, dia hisy sidina ho an’i Miandrivazo ary hitohy amin’ny faritra hafa toy ny any Belo sur Tsiribihina, Sainte-Marie sns izany.
Velom-panantenana ny mponina any Nosy Be izay mivelona amin’ny sehatry ny fizahantany. Azo antoka fa hitohy hatrany ny fahatongavan’ny mpizaha tany ao Nosy Be. Tsara ny manamarika fa tonga nanotrona ny Minisitry ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana toetr’andro tamin’ny fahatongavan’ny sidina voalohany ity ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Jocelyne Maxime, ny governoran’ny faritra Diana Daodo Arona Marisiky, ny depiote Tatie Chris, ny ben’ny tanàna Vita Gilbert ny Prefen’i Nosy Be, ny talem-paritry ny fahasalamana, raha tsy hilaza afa-tsy izy ireo.
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (346) 22 octobre 2020 Olona 04 naratra, vola 2 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy miisa enina AMBILOBE (116) 21 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (103) 22 octobre 2020 Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana IMERINTSIATOSIKA (93) 21 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (84) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (65) 22 octobre 2020